Isku-dhafka: maxay yihiin, sifooyinka, samaynta iyo muhiimada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 11/11/2021 17:40 | Geology
ka gogosha Waa dilaac ku yimaadda dhagxaanta oo aan inta badan la socon dhul go'a kaas oo ay tahay dhagaxa go'aamiya. Waxa ugu caadiga ah waa in uu jiro kala-soocida ugu yar. Caadi ahaan waxaa lagu kala soocaa cilladaha kuwaas oo ah jajabyo kuwaas oo aan ka heli karno silbasho ee blocks. Kala-goysyadu waa qaab-dhismeedyo qallafsan oo dhagaxyo ah oo aad ugu badan dabeecadda.
Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan u hurno maqaalkan si aan kuugu sheego wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato cleats, samayntooda iyo sifooyinkooda.
2 Hababka wadajirka ah
3 Muhiimadda cleats
5 Kala duwanaanshaha guuldarrooyinka
Sida qaababka kale ee juqraafiga, jihada kala-goysyada waxaa lagu qeexay laba cabbir:
Cinwaanka: Xagasha ay samaysay xariiqda jiifta ee ku jirta diyaaradda articulation iyo dhidibka waqooyi-koonfur.
Ku dhufo: xagasha ay sameysteen wadajirka iyo diyaarada jiifta ee mala-awaalka ah.
Kala-goysyadu maaha inay guud ahaan fidsan yihiin, mana aha inay ka jawaabaan qaab kasta oo joomatari oo caadi ah, sidaa darteed cabbirrada la tilmaamay way ku kala duwanaan karaan hal dhibic ilaa mid kale. Kala-goysyadu inta badan ma go'doomin, laakiin waxay la xiriiraan khaladaadka iyo qalooca. Sida caadiga ah, marka ay jiraan laba ama in ka badan oo kala-goysyada, waxaan ugu yeernaa nidaamka articular ama "nidaamka wadajirka."
Kuwa ugu fudud waa:
Nidaamka cleat is barbar socda: dhammaan kala-goysyadu waa isku jihayn iyo isku mid.
Habka wadajirka ah ee la gooyey: cleats waxay leeyihiin jihooyin iyo xaglo kala duwan, si ay u gooyaan meelo gaar ah. Kiisaska ugu caansan badanaa waa qoys ka kooban kala-goysyo isku xiran, halkaas oo laba ama saddex jihooyin wadajir ah oo muhiim ah ay soo saaraan muuqaal qaabaysan oo isku mid ah (qalloocin ama cadaadis).
Si loo kala saaro kala-goysyada isku-buuqa iyo kala-goysyada kala-goysyada, waxaa lagama maarmaan ah in la barto dhidibka ugu weyn ee isbeddelka gudaha ama gobolka, sababtoo ah isku-dhafka laftiisa ma bixin karo macluumaad ku filan (jeexid ama barokac). Marka laga hadlayo kala-goysyada balaadhinta, jihada qoyska ugu caansan ayaa inta badan ku toosan jihada fidinta, halka kala-goysyada isku-buuqa, ay tahay jihada bisector-ka degdega ah ee isku xira wadajirka.
Hababka wadajirka ah
Waxaa jira sababo badan oo ay u sameysan karaan, oo ay ku jiraan xoogagga jihaynta, sida kuwa keena cilladaha dhulka ama qulqulka. Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee isku-xidhka ayaa ah hoos u dhaca mugga walxaha (cufnaanta korodhka), taas oo markaa ku dhici karta sababo kala duwan:
Fuuqbax, sida wasakh hawada ku hadha ka dib marka la quusiyo.
Qaboojiyaha, sida colonnades basalt. Waxay ku sameeyaan qulqulka basalt, marka laafku adkeeyo, qulqulka basalt wuxuu u kala baxaa prisms (kala-soocida tilmaanta) iyada oo loo marayo qaboojin ku xigta. Waddada Giant's Causeway ee Ireland, ama Los Órganos de La Gomera, ayaa ah qaar ka mid ah tusaalooyin badan oo caan ah oo kiiskan ah.
Dib u recystallization. Marxaladda wakhtigu waxay u roon tahay, qalabka juqraafiga, dib-u-habaynta molecules kuwaas oo si wadajir ah u balaadhinaya fidinta shabakadaha crystalline, kordhinta cufnaanta walxaha, taas oo la magdhabay, sida kiisaska hore, oo leh samaynta dildilaaca.
Depression. Waa sabab kale oo muhiim ah oo keenta isku-xirnaanta, sida midda saamaysa pluto granite oo nabaad-guurku muujiyo. Tani waa sida qaababka Xarunta Spain loogu yeero ber mooes ama berrocales ay asal ahaan ka soo jeedaan.
Xaraashyadu waa muhiim sababtoo ah waxay guud ahaan xakameeyaan qaabka qulqulka iyo qaabka xeebta, waxayna sidoo kale bixiyaan waddo ay biyuhu u galaan qoto dheer ee cufka dhagaxa, si kor loogu qaado nabaad guurka. Dhagaxyada isku-dhafka ah waxay u nugul yihiin dareeraha, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa sida aquifers ama saliidda dhagaxa ama kaydka gaaska iyo macdan qodayaasha ayaa fiiro gaar ah u leh xiriirka, maadaama joogitaankooda ama maqnaanshahooda jiho gaar ah ay hore u qaadi karaan ama dib u dhigi karaan shaqadaada.
Si loo kala saaro isku-buufinta iyo xajinta xiisadda. waa in la darso dhidibka ugu weyn ee qallooca deegaanka ama gobolka, sababtoo ah cleat lafteedu ma bixin karaan macluumaad ku filan (jeexid ama kabid). Xaaladda balaadhinta, jihada qoyska ugu caansan ayaa inta badan ku toosan jihada fidinta, halka cadaadiska, ay tahay jihada bisector-ka degdega ah ee ka gudbaya wadajirka.
Balaadhinta Kuwaas waxaa sababa nidaamka walbahaarka ee u dhaqma massif dhagax ah, taas oo ah natiijada qaboojinta (dhagaxyada igneous. Qaab dhismeedka Columnar) ama qalajinta (dhagaxa sedimentary).
Depression. Nidaamku wuxuu u kobcin karaa in ka badan ama ka yar oo siman oo dusha sare ah, gaar ahaan qulqulka dhagaxyada igneous, sida granite.
Waxa sababi kara dareere ka soo baxa xayndaabka dhagaxa leh marka culayska badani meesha ka baxo.
Tectonics: waxay asal ahaan ka soo jeedaan natiijada tooska ah ee laalaabyada ama riixitaanka dhagaxa, guud ahaanna waxay aqbalaan saddex hab-raac: xajin, oo barbar socda dhidibka laalaabyada; nidaamka u janjeera, siman in cleats, iyo nidaamka conjugate ah ee cleats oblique si fiican u muuqdaan in ay hoos 45 ° jihada guuritaanka qaabdhismeedka. Xaaladaha qaarkood, labada kooxood ee ka kooban habka isku xidhka ayaa u koraan si aan sinnayn. Nidaamyadan ereyga "goynta dhogorta" ayaa la isticmaalay, taas oo u dhiganta qiyaastii jihada aragtida ee ugu badan ee xiirid.
Kala duwanaanshaha guuldarrooyinka
Cilladaha dhulka waxa lagu qeexi karaa dildilaacyo fidsan oo lagu arkay qayb ka mid ah qolofta dhulka oo leh baro-kac balaadhan oo ku filan in lagu eego indhaha qaawan ama hawada. Ballaca cilladaha ayaa ku kala duwanaan kara dhowr sentimitir ilaa dhowr kiiloomitir, oo boqollaal mitir isu jirta midba midka kale, sida San Andreas Fault ee California, USA Dhaqdhaqaaqa khaladaadka ayaa muhiim u ah samaynta nidaamyada buuraha. Cillada dhulka kala saartaa waa laba baloog, oo midba midka kale ka barakacay.
Xaaladdan oo kale waxaan aragnaa in cleats waxay yihiin oo kaliya jabka ku jira caawinta simbiriirrada ee dhaca marka cilladaha ay abuurmaan ay sababto dhulgariir ama joogitaanka geesaha qaar ee taarikada tectonic.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto cleats iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Kala-goysyada